Ny Apple Tv 4 dia efa miseho ao amin'ilay faritra nohavaozina ao amin'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple TV 4 dia efa miseho ao amin'ny faritra Refurbished an'ny Apple
Momba ny fahatongavan'ilay vaovao Apple TV taranaka fahefatra mankany amin'ilay faritra naverina tamin'ny laoniny na namboarin'i Apple. Eny, mazava ho azy fa ity dia fizarana iray tianay ary satria izaho dia avy amin'ny Mac dia manoro hevitra foana izahay raha hividy ireo fitaovana rehetra ananan'ny orinasa Cupertino ao amin'ny katalaoginy.
Betsaka aminareo no mahalala tsara an'io faritra ao amin'ny tranokalan'ny Apple io, izay amidy amidy ny fitaovana miaraka amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny an'ireo vaovao Herintaona ofisialy no atolotra anay raha sendra misy olana amin'ny fitaovana. Eny, ilay Apple TV 4 natomboka vao haingana dia efa nahatratra ity faritra ity.
Tsy ny rehetra dia vaovao tsara ary izany dia amin'izao fotoana izao ireo maodely naverina tamin'ny laoniny an'ny Apple TV vaovao any Etazonia ihany no misy. Azo antoka fa afaka andro vitsivitsy na herinandro maromaro dia ho tonga amin'ny sisa amin'ny fivarotana an-tserasera ireo singa voalohany.
Ireo modely naverina tamin'ny laoniny ireo dia mandany vola $ 129 ho an'ny 32GB y $ 169 ho an'ny maodely 64GB (araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony) fa raha mahatratra ny fivarotana an-tserasera any Espana dia mila manampy haba izahay. Na izany aza, ny vidiny dia mahaliana kokoa noho ny hoe mividy vaovao isika ary ny fatiantoka tokana dia herintaona ny fiantohana, ny ambiny azontsika lazaina fa "mitovy tanteraka" toy ny hoe nividy azy vaovao isika.
Tianay ny mahita ity faritra ity amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanamboarana ny MacBook 12-inch, fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy soritra. antoka izany dia tahiry izay mety ho tonga mora ampiasaina raha tsy manana olana isika rehefa tsy mamoaka vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny Apple TV 4 dia efa miseho ao amin'ny faritra Refurbished an'ny Apple
Ho avy ny Taom-baovao Sinoa ary te hankalaza azy ao amin'ny Apple Store i Apple
Nanamafy i Apple fa mamorona Street View azy manokana